မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလျှင်မြန်ဆုံး တိုးတက်နေသော အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ ၀င်ပေါက်
-- တည်နေရာ -- ကခငျြပွညျနယျကယားပွညျနယျကရငျပွညျနယျခငျြးပွညျနယျစဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးတနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီးနပွေညျတျော ပွညျထောငျစုနယျမွပေဲခူးတိုငျးဒသေကွီးမကှေးတိုငျးဒသေကွီးမန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးမှနျပွညျနယျရခိုငျပွညျနယျရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးရှမျးပွညျနယျဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး -- မြို့နယ် -- -- ရပ်ကွက် -- -- အိမ်ရာအဆောက်အအုံ အမျိုးအစား -- တိုက်ခန်းကွန်ဒိုလုံးချင်း၊ ဗီလာဆိုင်ခန်း၊ ရုံးခန်းစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမြေကွက်အခြား -- သက်တမ်း -- ဘိုးဘပိုင်စာချုပ်ဖြင့် ငှားရမ်း သုံးပိုင်ခွင့် -- အိပ်ခန်းများ -- 12345+ -- အိမ်သာများ -- 12345+
အသင်းဝင်ပါက သင်သည် PropertyNagar၏ သတ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်များကို သဘောတူပါသည်။
တည်နေရာ -- တည်နေရာ -- ကခငျြပွညျနယျကယားပွညျနယျကရငျပွညျနယျခငျြးပွညျနယျစဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးတနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီးနပွေညျတျော ပွညျထောငျစုနယျမွပေဲခူးတိုငျးဒသေကွီးမကှေးတိုငျးဒသေကွီးမန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးမှနျပွညျနယျရခိုငျပွညျနယျရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးရှမျးပွညျနယျဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး
မြို့နယ် -- မြို့နယ် --
ရပ်ကွက် -- ရပ်ကွက် --
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ မလိခအိမ်ရာအတွင်း ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော လုံးချင်းအိမ် (Malihku Real Estate)
Apartment for sale at Kyaukdadar downtown area!
Suitable price condo for sale in Sanchaung !
Signature Construction Co. မှဆောက်သော Mini Condo ၇၅% ပြီစီးနေပြီဖြစ်သော တိုက်ခန်းအား(၂၅)လ အရစ်ကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
View Point (အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ)မှ ကမ္ဘာအေးဗီလာကွန်ဒိုတွင် အမြန်ရောင်းရန်ရှိသည်။
အထူးလျော့ဈေးဖြင့် နေရာကောင်းရှိ ကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်းများ (25 ပေ၊ ပေ 50၊ အမြင့်9ပေ။) တိုက်ခန်းကျယ် ရောင်းမည်။
​ရွှေပြည်​သစ်​(အိမ်​ခြံ​မြေ)မှ ​မြေညီတိုက်​ခန်းငှါးမည်​။ မိုး​ကောင်းလမ်း
Available for rentagood flat in SandarMyaing Condominium.
New condo for rent!
Condominium for rent at quite and standard area!
Good room for rent in Star City Condo!
2000 Sqft Condo for rent which is suitable for your Business!
© 2017 PropertyNagar.com